Let's welcome Daw Aung San Suu Kyi to SF Burmese Community: Venue Time Changes & Parking / Transportation Updates
Venue Time Changes & Parking / Transportation Updates
နေ့စွဲ - ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်
စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် 2335 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94118 ရှိ University of San Francisco - War Memorial Gym ၌ ကျင်းပမည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို (ဘေးဧရိယာ) မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချိန်ပြောင်းလဲထားပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ လာရောက်သူများ အဆင်ပြေစွာ လာရောက်နိုင်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်များကိုလည်း ပူးတွဲ ဖော်ပြထားပါသည်။ ကားရပ်နားရန်နေရာများ အခက်အခဲရှိနိုင်သောကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့် လာရောက်သူများအနေဖြင့် နီးစပ်ရာ မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေများ စုပေါင်းလာရောက်ကြရန်နှင့် အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ် ရထားများကို စီးနင်းလာရောက်ကြပါရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
၁။ Ocean Beach Public Parking (Free Parking)
ကြိုပို့ယာဉ်များ ( Fulton Street & Great Hwy) တွင် ရှိမည်။
၂။ De Young Museum Parking Garage ( Paid Parking) (Maximum $30)
ကြိုပို့ယာဉ်များ ( Fulton Stree & 10 th Avenue) တွင် ရှိမည်။
Larkin Street & Fulton Street (Grove Street Between McAllister Street ) စုရပ်သို့ လာရောက်ပါ။
ကြိုပို့ယာဉ်များဖြင့် အခမ်းအနားကျင်းပရာ နေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
- Take BART to arrive Powell Station (SF) by 8:15am latest
- Take Bus (SF MUNI) to USF by 8:30am latest
- Walk to USF (5 to 10 minutes) - War Memorial Gymnasium
- In order to catch the Bus schedule, there are Only2BART lines running from East Bay to Daly City on Saturdays. (Other2lines from East Bay do not run until 8:45am.)
> Pittsburg/Bay Point to Daly City
> Dublin/Pleasanton to Daly City
- Fares: depends on the distance
- There are4available lines from near Powell BART Station to near USF War Memorial Gym
>5(From Market & Powell Street to Fulton & Clayton Street)
> 31 (From Market & Powell Street to Turk & Roselyn Street)
> 21 (From Market & Powell Street to Hayes & Clayton Street)
> 38 (From Geary & Powell Street to Geary & Collins Street)
- Fares (Exact Change Required. No change given or No refunds provided for overpayment)
> $ 2.00 - Adult
> $ 0.75 - Senior (age 65 or Older)
> $ 0.75 - Youth (between ages5and 17)
Posted by Maung Yit at 12:10 PM